Dimensions: वैनिटी: 1800*600*576मिमी
Q1: बाथरूम भ्यानिटी क्याबिनेट को सामग्री के हो?
A1: हामी फ्रेमको लागि ठोस काठ प्रयोग गर्दछौं, पछाडि प्लाईवुड&साइड प्यानल.
Q2: फ्रान्क OEM प्रदान गर्दछ&ODM सेवा?
A2: OEM स्वागत छ&ODM अर्डर, हामीसँग पेशेवर डिजाइन टोलीहरू छन् 13 OEM को लागी अनुभव&ODM सेवा.
Q3: मुख्य समय कति हो??
A3: सामान्यतया 35 दिनहरु.
Q4: प्याकेजि methods्ग विधाहरू के हो?
A4: वैनिटी: हनीकम्ब बोर्ड अन्तरदृष्टिको साथ मानक गत्तेको डिब्बा. काउन्टरटप: भित्र बबल फारमको साथ मानक गत्ते का डिब्बा, बाहिर काठको फ्रेम वा काठको केस सहित प्याक। प्याकेजिंग विधिहरू अनुकूलन गर्न सकिन्छ.
Q5: कसरी भुक्तानी सर्तहरूको बारेमा?
A5: 30% जम्मा उन्नत, 70% ढुवानी अघि सन्तुलन.
Q6: के म उत्पादनहरु मा मेरो लोगो हुन सक्छ??
A6: हो, तिमी सक्छौ.
Q7: फ्र्याकले प्रदान गरेको मूल्यमा थप मूल्य?
A7: फ्रैंक प्रोड फ्री धातु लोगो, स्टक, उत्पाद डिजाइन, अनुकूलित क्याटलग डिजाइन र तपाईंको लागि व्यावसायिक उत्पाद फोटोहरू.
If you have some problems about Double basin design modern MDF bathroom vanity cabinet with led light mirror F-7578, or want to know more details about Buthtub,Mordern style,ठोस सतह,आदि. Welcome to contact us!